စစ်ဝတ်စုံဝတ်တာနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ် ~ နေမင်း - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
စစ်ဝတ်စုံဝတ်တာနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ် ~ နေမင်း
09 October, 2017, 01:46 PM
တစ်သက်မှာ တစ်ခါကျင်းပခွင့်ရတဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံအတွက် အလှပဆုံးနဲ့ စတိုင်လ်အကျဆုုံး ဖြစ်ချင်တာ မင်္ဂလာမောင်မယ်တိုင်းရဲ့ဆန္ဒလို့ ပြောရင် လွန်မယ်မထင်ပါဘူး။ မင်္ဂလာဝတ်စုံကို ဘယ်မှာ ဘယ်သူနဲ့ ချုပ်မလဲ။ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံလား၊ ရိုးရာဝတ်စုံလား အမျိုးမျိုး ဘာကိုု ရွေးချယ်မလဲ။ စဉ်းစားတိုင်ပင် ရွေး ချယ်ကြရတာပါပဲ။ ဒီတစ်ပတ် 8days Wedding Special အတွက်တော့ နေမင်းနဲ့ အေးမြတ်သူကို တပ်မတော်ယူနီဖောင်းနဲ့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ wedding special ရိုက်မယ်လို့ စည်းဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်က ကိုယ့်ကို ရင်တုန်သွားစေတာတော့အမှန်ပါပဲ။၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းမှာ wedding show တချို့မှာ သရုပ်ပြလျှောက်တဲ့အခါ တပ်မတော် ဝတ်စုံတွေနဲ့ပါ လျှောက်လှမ်းပြတာမျိုးတွေရှိလာတဲ့အပြင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်း လွဲချော်မှုလေး တချို့တလေ အမှားအယွင်းလေး တွေအတွက် ထောက်ပြဝေဖန်ပြော ဆိုမှုတွေလည်း social media ပေါ်မှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေကိုု ဒီလိုု ဝတ်စုံမျိုးနဲ့ ရိုက်ချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း ဟုုတ်ကဲ့ ရိုက်ပေးမယ်လေ အစ်မလိုု့ ပြောတဲ့အခါ ပထမဆုံးစဉ်းစားရတာ အဲဒီဝတ်စုံကို ဘယ်သူနဲ့ချုပ်မလဲ ဘယ်ရာထူးအတွက် တံဆိပ်တွေ ရင်ထိုးတွေက ဘယ်လိုတတ်ရတာလဲ ကိုယ်သေချာမသိ တမင်တကာ မဟုတ်ဘဲ အမှတ်တမဲ့ မသိလိုက်လို့တောင် လွဲသွားတာမျိုး မဖြစ်ချင်တာကြောင့် ကိုုယ်ဟာ အနီးစပ်ဆုုံး ကူညီပေးနိုင်မယ့်သူတွေကို နားပူ နားဆာကပ်ရတယ်။ အကျိုးအကြောင်းပြောပြရတယ်။ ဝတ်စုံအတွက် ကူညီပေးသူ ကိုလွင် စစ်ဝတ်စုံချုပ်ဆိုုင် မင်္ဂလာဒုုံစျေးနဲ့ အဘက်ဘက်မှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးသူ တာဝန်ရှိသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Q. Wedding Show & Photo Shoot တွေမှာ ပါဝင်ရတဲ့ ခံစားမှု ပြောပေးပါ။
A. Wedding Show က တစ်ခါပဲလျှောက်ဖူးတယ်။ ဟိုးအရင် သရုပ်ဆောင်စလုပ်ခါစအချိန်တုန်း ကပဲ အဲဒီနောက်ပိုင်း မလျှောက်ဖြစ် တော့ဘူး။
Q. ကိုုယ့်မင်္ဂလာပွဲကို ဘယ်လို ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးမျိုးဖြစ် မိလား။
A. စတုန်းကတော့ဖြစ်ဖူးတာ ပေါ့။ ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ခွင့် ကို မတွေးတော့ဘူး။ ပင်ပန်းလိုု့။
Q. နေမင်းရဲ့ သတို့သမီးလောင်း ချစ်သူကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ ဘယ်တော့လောက်ပရိသတ် ကိုပြောပြမလဲ။
A. ပြောပြပါတယ်။ ခုချိန်မှာ တော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ တိတိကျကျ ပြောဖို့လည်းမလိုတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်က အရင်တုန်းကတည်းက ကွယ်ဝှက်ပြီးနေတတ်သူ မျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်း လင်းပဲနေလာခဲ့တာ။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားလာနေတဲ့ အခါ တစ်ခါတလေ သူအတူတူ ပါကောင်းပါပါတယ်။ ကြည့်တတ် ရင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
Q. တပ်မတော်သားတစ် ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဘယ်လိုလေ့လာပြင်ဆင်လဲ။
A. ကျွန်တော် စစ်ကားစရိုက်ရတာ ပြည်ထောင်စုသစ္စာ အဲဒီဇာတ်ကားက ပရိသတ် ကျွန်တော့်ကို နေမင်းရယ်လို့ အသိအမှတ်ပြန်ပေးတဲ့ ကားပါ။ နေမင်းမှာ ပရိသတ်တွေရှိတယ်လို့ Alarm ပြန်ပေး လိုက်တဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ် ခဲ့တဲ့ကားပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော် စစ်ရောင်ဝတ်တာများတယ်။ အဲဒီကားရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို တာကလည်း အပေါ်ယံမှာရှိတတ်တဲ့လူတွေပြောနေမြင်နေကြတဲ့ ဘဝ တွေမဟုတ်တဲ့ တကယ့် lifestyle တစ်ခုကိုတင်ပြတဲ့ဇာတ်မျိုး ရိုက် ရတာကြောင့် ကျေနပ်တယ်။ နောက်တစ်ခု အဲဒီလိုဘဝမျိုးရိုက်ဖို့အတွက် အပေါ်ယံအကျႌလေးကောက်လဲ ရိုက်လိုက်လို့မရဘူး။ ဗထူးတပ်မြို့ အရာရှိရိပ်သာမှာ ကျွန်တော်တို့ ၄၅ရက်လုံးလုံး သွားနေပြီး ကိုယ်မပါလည်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် လက်ဝှေ့ထိုး တပ်မိသားစုတွေနဲ့ စကားပြောတာကအစ အကုန်လုံးက သူတို့ဘဝတွေထဲ ကိုယ်က ရောက်မှန်းမသိရောက်နေတာမှ ကိုယ်က မင်းသားဆိုတာတောင်မေ့သွားတယ်။ ကိုယ်သည် ဗိုလ်ကြီး မိုးဇော်ဖြစ်နေတယ်။ ယူနီဖောင်း လျော့လျော့ရဲရဲဖြစ်နေရင်တောင် စိတ်ကသိတဲ့ အနေအထားဖြစ်တယ်။ စစ်ဝတ်စုံဝတ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်နဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်နေအောင်ကို ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ အနုပညာဆိုတာ ကိုယ်ကညီမျှတဲ့ အားနဲ့ကြိုးစား အားထုတ်မှုလုပ်ရင် ပရိသတ်ကလည်း အဲဒီကြိုးစားမှုနဲ့ မကတဲ့ အားပေးမှုကို ပြန်ပေးတာအနုပညာ သဘောပဲ။ ပြည်ထောင်စုသစ္စာက ကျွန်တော်တို့တွေက ကိုယ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေပီပြင်ဖိုု့ကြိုး စားခဲ့ကြတာပဲရှိတယ်။ ပရိသတ် အဲဒီလောက်အားပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ သို့သော် ကျွန်တော်တိုု့ ကြိုးစားမှုကိုု တန်ပြန် သက်ရောက်အသိအမှတ်ပြုပေး ခဲ့ကြတယ်။
Q. ဒီမျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံရိုက် ဖြစ်တဲ့ခံစားမှု...
A. ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် မှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်ရင် ငါ တော်တော်စစ်သားရုပ်ပေါက်နေပြီလားလို့ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က တပ်မတော်ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ငါတော့ selfie ရိုက်တင်လိုက်မယ်ဆိုပြီး တင်ခဲ့တာမရှိဘူးဗျ။ ကျွန်တော် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တိမ်ပြာသောနေ့၊ ပြည်ထောင်စုသစ္စာရိုက်ကွင်းက ပုံလေးတွေတင်ပေးဖြစ်တယ်။ ကိုယ့် ဓာတ်ပုံကိုကြည့်တာနဲ့ ကိုယ်ဘာကို ဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာ ကြည့်သူက မြင်သွားရင် စကားတွေအများကြီး ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။ ခုလို wedding ပုံဆိုလည်း မကြီးအေး မြတ်သူကို ကျွန်တော်ပရီရိုက်ပေးတဲ့ သဘောပါပဲ။
Q. ခုနောက်ပိုင်းမှာ အွန်လိုင်း ကိုသေသေ ချာချာသုံးလာတာတွေ့ ရတယ်နော်။
A. အရင်တုန်းက ကျွန်တော် အွန်လိုင်းသိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့် အနုပညာကောင်းရင် ပရိသတ်က ကိုယ့်ကို အားပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံ ကြည်ခဲ့တာ။ ခုသုံးတယ်ဆိုုတာက ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေပရိသတ်ကို ပြောပြ ချင်လာတယ်။ ဒါကြောင့်သုံးဖြစ်လာတာ။
Q. ပရိသတ်ကိုပြောပြချင် တာက...
A. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနုပညာတွေကို စိတ်ဝင်စားပေးကြပါ။ အည့ံများစွာ ထဲကနေ အကောင်းဖြစ်အောင် ရပ်တည်ဖို့က တော်တော်ကြီးကြိုးစား ယူရပါတယ်။ အရေအတွက်နဲ့ အရည်အချင်းရှိအောင်ကြိုးစားနေ ပါတယ်လိုု့။
8days Cover ရိုက်ကူးမှုအတွက် ပရိသတ်ဝေဖန်မှုကို ရင်ခုန်ပါတယ် - အေးမြတ်သူ
Q. Wedding ဝတ်စုံတွေနဲ့ ရိုက်ရတဲ့ အချိန်တိုုင်းခံစားမှုက...
A. စရိုက်ကာစကတော့ ပျော်တယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ နောက်တော့လည်း တအားရင်မခုန်တော့ဘူး။ ဒါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ့ဆိုတဲ့စိတ် နဲ့ ရင်မခုုန်တတ်တော့ဘူး။
Q. ဒီနေ့ ရိုက်ရတဲ့ ခံစားမှုက ရော
A. ဒါတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင် ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ နှစ်တိုင်းက ထိုင်မသိမ်းဝတ်စုံတွေနဲ့ ပဲရိုက်လာတာ။ ဒါက ယူနီဖောင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ အမှား အယွင်းနည်းနည်းရှိရင်လာမယ့် အကျိုးဆက်က နည်းနည်းများ တယ်။ ဒီမျက်နှာဖုံးထွက်လာရင် ပရိသတ်က ဘာပြောမလဲဆိုတာကို တော့ ရင်ခုုန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာ သရုပ် ဆောင်ရတာ နည်းနည်းခက်တယ်။ ဒီဝတ်စုံက ကိုယ့်ကိုထိန်းတယ်။ ကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုယ့်ကြောင့် ထိခိုက်သွား မှာမျိုးကိုကြောက်တယ်၊ စိတ်ပူတယ်။
Q. နေမင်းက မကြီးအေးမြတ် သူအတွက် ပရီရိုက်ပေးတာတဲ့...
A. ဟုတ်လား သူကဘာလို့ အဲဒီလိုပြောတာလဲ။
Q. မင်္ဂလာသတင်းကဘယ် တော့လောက်ကြားရမလဲ။
A. အမြဲပြောပါတယ်။ ၃၅ ပါ လိုု့။
A. တစ်ခါတစ်လေမှာ စဉ်းစားမိတယ်။ ကိုယ့်မင်္ဂလာပွဲကျရင် မျက်နှာကြီး စပ်ဖြီးဖြီးဖြစ်နေမလားလိုု့။ ပြောချင်တာ ဒီမျက်နှာဖုံးလေးရိုက်ရ တာထူးခြားပါတယ်။ နေမင်းနဲ့ အေးမြတ်သူက မဆုံတာ တော်တော်ကြာပြီ။ 8days cover ကြောင့်ပြန်ဆုံရတယ်။ အရင်တုန်းက နေမင်းနဲ့ အေးမြတ်သူ အတွဲကို အားပေးသလို ဒီမျက်နှာဖုံးလေးကိုု လည်း အားပေးစေချင်ပါတယ်။